Umatshini wokuhambisa umbane weChina wombane kunye nomenzi mveliso Izixhobo zoLungiso lweChengxin
Uthotho lwe-Electromagnetic vibration feeder uthotho lusetyenziselwa ukuhambisa ibhloko, igranular kunye nezinto zomgubo ezisuka kwindawo yokugcina izinto okanye ifanele ukuya kwisixhobo sokufumana ngobungakanani, ngokufanayo nangokuqhubekekayo.
Uthotho lwe-Electromagnetic vibration feeder uthotho lusetyenziselwa ukuhambisa ibhloko, igranular kunye nezinto zomgubo ezisuka kwindawo yokugcina izinto okanye ifanele ukuya kwisixhobo sokufumana ngobungakanani, ngokufanayo nangokuqhubekekayo. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokondla sokuhambisa ibhanti, ikheshi lebhakethi, izixhobo zovavanyo, isamente yesamente, isityumzi, isityumzi kunye nezinto ezinobuncwane okanye izinto eziyimpuphu zamasebe ohlukeneyo emizi mveliso; isetyenziselwa ukubethelwa ngokuzenzekelayo, ukupakisha ubuninzi, njl.njl. Isetyenziswa ngokubanzi kwezimbiwa, isinyithi, amalahle, izinto zokwakha, ishishini ukukhanya, ishishini lamachiza, amandla ombane, oomatshini, iinkozo, amayeza kunye namanye amashishini.
1. Ubukhulu obuncinci kunye nobunzima bokukhanya. Inezinto eziluncedo kulwakhiwo olulula, ukufakela okulula, akukho zixa zijikelezayo, akukho ukuthambisa, ukugcinwa okufanelekileyo kunye neendleko zokusebenza eziphantsi.
2. Ingatshintsha kwaye ivule kwaye ivale ukuhamba kwezinto ngokukhawuleza, kwaye ukuchaneka kokondla kuphezulu.
3. Ukulawulwa kombane kwamkela i-SCR yesiqingatha sokulungiswa kwesekethe yesekethe, enokuhlengahlengisa isixa sokondla, kwaye uqaphele ulawulo lwendawo enye kunye nolawulo oluzenzekelayo lwenkqubo yemveliso.
4. Kwinkqubo yokondla, umbandela ngokuqhubekekayo wenza intshukumo yokuphosa encinci, kunye nokudinwa komkhombe wokutya kuncinci.
5. Olu luhlu lwe-feeder ye-electromagnetic feeder alulungelanga izihlandlo ezineemfuno zobungqina bokuqhushumba.
Umthamo wonyango t / h
I-4.0 * 2
Uhlobo emseleni Flat
Egqithileyo I-czg kabini ubunzima be-feeder
Okulandelayo: Uthotho lwe-HGM lusebenze ukungcangcazela kumalahle
Isondlo esisebenzayo sokuShukuma
Isondlo esisebenza ngombane
Isondli se-Electromagnetic vibration feeder
Ixabiso leServer Electromagnetic Vibration
Ubushushu obuPhezulu bokuXhathisa ukungashukumi
Isondli seMoto eshukumayo
Abavelisi bezixhobo zokuhambisa ukutya
UMvelisi weVibration feeder
Abavelisi beVibration feeder
Ixabiso lokutya lokungcangcazela